Tenga Multifunctional Keychain Hexagon Coin Kunze EDC Tool | WoopShop®
Multifunctional Keychain Hexagon Coin Kunze EDC Tool
Multifunctional Keychain Hexagon Coin Outdoor EDC Tool - Dema yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Muenzaniso Nhamba: 67845
Material: Stainless simbi
Usage: Kumba DIY
Kupeta Banga Tactical Kupona: Inotakurika Multifunction Folding
Screwdriver Camping Kupona: Zvishandiso Kufamba Kits
Material: 420 simbi isina tsvina + plastiki
Kukura: 4CM × 4CM × 1CM
Mashandisiro Emashandisirwo: Sangana nezvakawanda zvemazuva ese zvinodiwa nezve banga uye chigero - vhura amazon katoni, cheka tambo diki, nezvimwe.
Package Inosanganisirwa: Multifunctional Hexagon Coin
Yemazuvano Mafashoni: Iyi yakawanda-zvishandiso gadget yakagadzirwa mune yakasarudzika hexagon chimiro mune yemazuvano fashoni. Iyo inouya yakashongedzerwa neakawanda mabasa kuti ikupe iwe yese-mu-imwe chishandiso chinobatsira pese paungachida. Iyi diki contraption ine zvakawanda zvekupa. Inosanganisira banga rekupeta, chekumisa bhandi rekukurumidzira, screwdriver set, dema multi-turusi kadhi ine mabasa akadai serura, hex wrench, bhodhoro rinovhura, faira, shinda yekucheka, uye chipikiri chinodhonza.
Yakanakira Kutakura: Iyi yakawanda-zvishandiso hexagon iri nyore kutakura newe sezvo idiki muhukuru chete 1.5 inches uye inouya nekiyi mhete yekubatanidza kune yako kiyi chibatiso.
Great Gift Idea: Iyi hexagon chishandiso kadhi kiyi mhete inoita inobatsira uye yakakosha chipo. Chipo chakakwana chevakomana, ma scouts, baba, murume, mukomana, vaunoshanda navo, kana chero murume muhupenyu hwako.
Valentine's Day Chipo Kune Varume: Yakakwana valentine yezuva zvipo zvakaoma kuwana. Izvi zvinogadzira chipo chinofadza chezuva reValentine kuna baba, murume, sekuru, mwanakomana, mukomana, waunoshanda naye. Chipo chikuru chezuva reValentine kumurume.
yakanaka uye compact, ese anobviswa zvikamu zvakabatwa nemagineti hapana kana mumwe wavo anogona kudonha ari ega
Chinhu chinowirirana, chinongoda kuyedza kushanda kwayo kwese, kukurumidza kutumira
Zvinhu zvakanaka, zvinoshanda multitool, ndinofunga zvichandiitira zvakanaka,